Systemback: Backup, System Restore ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Systemback dia rindranasa tsotra sy azo ampiharina izay manamora ny famoronana backup misy rafitra amin'ny alàlan'ny fitantanana ireo fisie fikirakirana ny mpampiasa. Ary raha misy ny olana, azonao atao ny mamerina amin'ny laoniny ny toe-javatra teo aloha an'ny Rafitra miasa.
Izy io koa dia manana asa tena ilaina fanampiny toy ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra miasa, izay azo ampiasaina hametrahana azy io hatrany am-boalohany ary na dia ny famoronana rafitra Operating amin'ny endrika mivantana aza, izany hoe "mivantana" hatao namboarina, ary adika amin'ny kapila CD / DVD na USB.
Hatramin'ny fotoana farany niresahana ny Systemback tao amin'ny DesdeLinux a lahatsoratra teo aloha, mitovy nohavaozina ampy mba ho raisina ho fampiharana miaraka amina fivoarana matotra na ho an'ny mpamorona azy io na ho an'ny vondron'ireo mpampiasa azy izay mihabe.
1 Momba ny Systemback
4 Ny zavatra niainako manokana
Momba ny Systemback
Amin'ny teny ofisialin'ny tranokala amin'ny launchpad ary ny azy developer Kendek:
Ny Systemback dia manamora ny famoronana kopian'ny backup sy ny fisie fikirakirana ny mpampiasa. Raha sendra olana dia azonao atao ny mamerina amin'ny laoniny ny toe-piainan'ny rafitra teo aloha. Izy io dia manana fiasa fanampiny toy ny fandikana ny Operating System, fametrahana ny Operating System ary ny famoronana ny Rafitra miasa amin'ny endrika mivantana.
Fampiharana hoy azo sintonina avy amin'ny tranokala Launchpad sy ny Tranonkala loharanom-baovao. Ary azo ampiasaina amin'ny fanarahana ny teny fampiasan'ny "GNU General Public Lisitra 3.0" (GPLv3).
Ny fizotran'ny fametrahana azy dia mbola tena mora foana ankehitriny ary mila manaraka ny fomba nofaritan'ny mpamorona azy fotsiny ianao, izay:
Ho an'ireo izay tsy manana Distros izay mamela ny manampy Repositories mivantana amin'ny alàlan'ny baiko "add-apt-repository" Azonao atao ny manitsy ny fisie "loharano.list" ary manampy ireto tsipika fitahirizana manaraka ireto:
Aorian'ny fanamboarana tanana ny kitapom-bolanao, tanteraho teo aloha ny tsipika misy ny hevitra baiko "apt-key" hametraka ny fanalahidy fitehirizana ary avy eo mihazakazaka a "Apt update" hanavao ny mitovy. Farany, tantano amin'ny alàlan'ny baiko ny fametrahana ny fonosana "Apt install systemback".
Miankina amin'ny Distro izay ezahanao apetraka «Systemback» mety ilainao famakiam-boky fanampiny na fiankinan-doha hamahana. Amin'ny ankapobeny, ny sasany amin'ireto fonosana ireto dia mety takiana amin'ny fametrahana azy eo aloha:
Ny Systemback dia azo ampiasaina amin'ny zavatra manan-danja maro, toy ny:
Backup ny rafitra miasa
Famerenana amin'ny laoniny ny rafitra miasa
Kopian'ny rafitra miasa
Fametrahana ny Rafitra miasa
Famoronana sary mivantana an'ny Operating System
Fanamboarana ny rafitra miasa
Fanavaozana ny rafitra miasa
Ireo sy ireo endri-javatra hafa dia mahatonga an'i Systemback ho fampiharana mendrika apetraka amin'ny Distros Linux anay.
Na eo aza ny zava-misy fa ny mpandraharaha azy ireo dia namarana ny fampandrosoana sy ny fanohanana izany tamin'ny 13/12/2017, ny kalitao, ny fahafaha-miasa ary ny maha-azo ampiharina ny fampiharana ankehitriny dia tena tsara ary ampiasain'ny vondrom-piarahamonina midadasika mavitrika amin'ny tambajotra Free sy GNU / Linux tambajotra sy vondrom-piarahamonina.
Ny zavatra niainako manokana
Fantatro sy nampiasa ny Systemback nandritra ny 2 taona teo aho mba hamokarana ISO azo zahana amin'ny rafitra fiasako, hampiasa azy io ho toy ny GNU / Linux Distro mahazatra. Ny andrana voalohany nataoko dia ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN Testing.
Ny fametrahana azy dia nahomby, ary ny fampiasa mahazatra dia tanterahina tsy misy olana. Namorona ny ISO fanao aho, saingy noho ny antony tsy fantatra, izay heveriko fa olan'ny fikirakirana ny Distro-ko, amina isan-jato kely amin'ny solosaina ny ISO dia tsy nampiakatra velona (mivantana) hapetraka.
Androany, ampiasaiko soa aman-tsara ny Systemback ho mpanorina lehibe an'ny Distro misy ahy ankehitriny antsoina hoe "MinerOS GNU / Linux" izay Distro miorina amin'ny "Ubuntu 18.04" natambatra tamin'ny Distro "MX Linux 17".
Systemback dia niasa tamim-pahombiazana 100% amin'ny fotoana tamin'ny karazana fitaovana notsapaina rehetra, izay omeko ho an'ny fanohanana tsara izay entin'ny rindranasa sy ny tranomboky Distro «MX Linux 17» ho an'ny «Ubuntu 18.04».
Manolo-kevitra manokana ny hampiasa Systemback aho hamoronana Distros anao manokana avy amin'ny Rafitra miasa misy anao.
Farany dia avelako ho anao ity horonantsary ity mba hahitanao ny fomba fampiasana Systemback ho an'ity tanjona ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Systemback: Backup, System Restore ary maro hafa
Toy ny mahazatra, lahatsoratra tena tsara nefa misy lesoka amin'ny tsipelina sy fitsipi-pitenenana tsy tambo isaina.
Fampiharana tena mahaliana.
Miarahaba anao sy tso-drano namana, fangatahana iray efa fantatro fa tena faran'izay azo ampiharina amin'ny systemback fa rehefa mametraka ny livecd namboarina niaraka taminy tany am-piandohana systemback dia mangataka fanamarinana ary tsy nahavita nanala izany aho fa manaisotra ny systemback aorian'ny fametrahana amin'ny kapila vaovao na milina, ary raha Fantatrao ny momba ny famerenana mivantana ny rafitra ho an'ny debian satria nampidina ireo deba aho
Miarahaba anao Eddy! Eny, mangataka fanamarinana marina i Systemback raha te hiditra sy hihazakazaka ny kopian'ny (fametrahana) ilay sary namboarina, saingy mbola tsy nanandrana nanala azy aho, noho izany, tsy hitako izay holazaiko aminao momba izany. Momba ny Repositories, ity ny rohy: https://launchpad.net/~nemh/+archive/ubuntu/systemback
NOOBS: mametraka rafitra marobe amin'ny Raspberry pi miaraka amin'ity fitaovana ity
openSUSE Tumbleweed dia havaozina amin'ny Linux Kernel 4.17 sy KDE 5.13